P-Mix 755 + 808 + 1064nm diode laser removal machine
755 808 1064nm Diode laser mwepụ igwe bụ tumadi maka iwepụ ntutu ọkachamara.
igwe a bụ FDA na Medical CE mma.
Ọ nwere oke elu powe 2000W, oke mkpụmkpụ mkpụmkpụ, yabụ ọgwụgwọ enweghị ihe mgbu, na ogologo ndụ ndụ, enweghị oke ịgba.
Typedị laser: Akwa siri ike Diode Laser
Ike njikwa ikike laser: 2000W
Ike niile: 4000W
Abù size: 12mm * 23mm
Akwụkwọ ikike: Afọ 2 enweghị oke
Ogologo: 755nm 808nm 1064nm
Sistemụ jụrụ: Refrigenọgide na-ajụ oyi -25
Ngosipụta: 10.4 Inch multi agba ihuenyo
Ọzụzụ: Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ + Vidiyo + Ọzụzụ n'ịntanetị
Abù size: 12mm * 20mm
Ugboro: 1-10Hz Kemeghi
Sistemụ jụrụ: Na-ajụ oyi friji 25
Thekpụrụ bụ isi nke Diode Laser Hair Removal Machine bụ nsonazụ ya. Igwe ahụ na-ewepụta laser 808nm nke enwere ike itinye uche na ya site na pigmenti dị na ntutu ntutu ma ọ gaghị emebi emebi epidermis gbara gburugburu. A na - etinye ike ọkụ site na pigmenti na ntutu isi na follicle mgbe ahụ ọ ga - agbanwe ghọọ ike ọkụ, si otú a na - ebuli ọnọdụ okpomọkụ nke follicle, rue mgbe ọnọdụ okpomọkụ ahụ dị elu, a ga - ebibi usoro follicle ahụ enweghị ike ịgbanwe agbanwe, a ga - ewepụ follicle ahụ mebiri emebi mgbe oge nke usoro anụ ahụ sitere n'okike, si otú a nweta ebumnuche iwepụ ntutu na-adịgide adịgide.
1. Ngwongwo kacha mma laser
755 + 808 + 1064nm kachasị mma maka ịmịkọrọ melanin ka ọ nwee ike ịmetụta n'akụkụ dị iche iche na ntutu ntutu wee rute iwepụ ntutu ọ bụla nke ọma. Site na eserese, anyị nwere ike ịhụ 808nm kachasị mma maka ịmịkọrọ melanin na ịmịpụ ndị ọzọ.
2. Short laser usu obosara
Laser usu oge bụ 10ms na 80ms mgbanwe, nwere ike ime ọgwụgwọ n'ụzọ dị irè pụrụ iche maka dị iche iche ntutu na-adịgide adịgide!
3. Enweghị pigmenti, a na-eji ụdị akpụkpọ anụ ọ bụla.
Usoro nhichapụ ntutu P-808 na-eji teknụzụ na-abanye na akpụkpọ ahụ na-amịpụta obere ọkụ na enweghị pigmenti.
4. Pure Sapphire kọntaktị jụrụ usoro nwere ike ijide n'aka na ọgwụgwọ dị mma karị na enweghị mmerụ ahụ.
Sapphire ọcha Sapphire na-eme ka usoro jụrụ oyi nke P-808 nwere ike ijide n'aka na dọkịta na-eji ike kachasị ike na enweghị ike imerụ anụ ahụ ahụ. Kinddị usoro jụrụ oyi a nwere ike ijide n'aka na enweghị mmerụ ahụ na akpụkpọ ahụ mgbe enyere ndị ọrịa nsogbu. Dị ka a kọrọ, nrụgide ahụ nwere ike ịbawanye ọkụ 30% -40%.
5. Nnukwu ntụpọ buru ibu nwere ike ịsọ ọsọ ọsọ ọsọ.
P-808 iji 12 * 12mm nnukwu ntụpọ size. Ọ na-ejide n'aka na mgbe ị na-eme nnukwu ntutu mwepụ ma na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na arụmọrụ. N'ihi nnukwu ntụpọ buru ibu, ọ nwere ike gbanahụ ọgwụgwọ ugboro ugboro maka mpaghara ntutu.
6. Super nnukwu ezi agba ihuenyo mmetụ -eme ka ime ihe mfe 10.4 nke anụ ọhịa ahụ multi agba ihuenyo mmetụ, ị nwere ike họrọ nwoke ma ọ bụ nwanyị, na agba akpụkpọ na ọgwụgwọ ebe, nnọọ mfe iji rụọ ọrụ!
1. Ihuenyo aka bụ isi ọrụ na ngosipụta nke usoro iwepụ ntutu.
2. N'ịnabata acha anụnụ anụnụ na-acha ọcha na agba, interface bụ consise, ogugu ma na-echebara echiche.
3. Dabere na ergonomics ， a na-arụ ọrụ ọrụ iche iche maka ma nwoke ma nwanyị。
4. Site na ihuenyo mmetụ, ị nwere ike nweta ọrụ ndị ahụ gụnyere nkwụsị, ntọala ntọala laser ma dị njikere ma jiri laser.
5. pụrụ nanị ime oke ntọala, mode mgba ọkụ, friji oghere na shutdown n'oge na njikere mode.
Guzobe na 2005, Beijing na Mma S & T Co., Ltd na-ebute ụzọ n'itinye laser dị elu na teknụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ siri ike na ụlọ ọrụ ahụike na ụlọ ọrụ mara mma.
Ugbu a, anyị mepụtara usoro Mona IPL, E-light, CO2 fractional laser, 808nm diode laser, ultrasonic cavitations, fractional RF and hair re-growth laser.
Na oru oma R & D otu, uka mmepụta ike na a pụrụ ịdabere na àgwà akara usoro, Beijing Sanhe Mma ọnọde OEM & ODM ọrụ ma nyere ndị ahịa anyị aka iwulite aha ha na asọmpi n'ahịa.
All usoro nke na-amị bụ n'okpuru ISO13485 Quality usoro na dakọtara na OA asambodo arịrịọ.
Beijing Sanhe Mma ga-arụsi ọrụ ike mgbe niile maka ịbubata ngwaahịa kachasị mma na mgbe ọ gachara ọrụ.
Onye Kpọtụrụ: Alex Song, Sunny Zhao
Nke gara aga: EMSculpt Building Akwara Machine
Osote: P-mix diode laser ntutu mwepụ na Mmaji Atọ wavelength
755 + 808 + 1064nm diode laser mwepụ
808nm FDA laser wepụ ngwaọrụ
igwe mwepụ ntutu
igwe mwepụ ntutu laser
na-adịgide adịgide ntutu mwepụ
Portable 600w 808nm Diode Laser Hair mwepụ Ma ...
P-mix diode laser ntutu mwepụ na Mmaji okpukpu atọ ...
1200W diode laser mwepụ igwe afọ las ...
New ọkachamara na-adịgide adịgide mma salonlọ Mmanya 755 808 ...
Shr Opt Ipl Nwepu Ntutu, Ọrịa Co2 Laser, otutu mwepụ mwepụ, Shr Ipl Opt, Co2 Fractional Laser Machine, Ems Akwara mkpali Machine,